'स्प्यारो एसएमएस' जिबिजी ग्लोबल फाइनलिस्टमा - Living with ICT
October 23, 2017, Monday
Home / Featured / ‘स्प्यारो एसएमएस’ जिबिजी ग्लोबल फाइनलिस्टमा
‘स्प्यारो एसएमएस’ जिबिजी ग्लोबल फाइनलिस्टमा
एसएमएस मार्फत लाखौ मानिस र हजारौ संस्थाहरुलाइ सेवा दिइरहेको स्प्यारो एसएमएस सन् २०१६ को गुगल बिजनेश ग्रुप (जिबिजी)को अन्तिम प्रतिस्प्रधामा पुग्न सफल भएको छ । जानकी टेक्नोलोजी अन्तर्गत रहेको स्प्यारो एसएमएसले सन् २०१६ को जिबिजीको ग्लोबल प्रतिस्प्रधामा ४७० कम्पनी तथा प्रडक्टहरुसग प्रतिस्प्रधा गर्दै अन्तिम ९ मा पुग्न सफल भएको हो ।
गुगल गन्तर्गतको गुगल बिजनेश ग्रुपले केहि वर्षदेखि विश्वभरका उत्कृष्ट प्रडक्टहरुलाइ जिबिजी स्टोरीको रुपमा प्रतिप्रधा गराएर सम्मान गर्न थालेको हो । नेपालको तर्फबाट समावेश भएको स्प्यारो एसएमएसले यो प्रतिस्प्रधाको अन्तिम ९ मा आउन सफल हुन गौरबको विषय भएको कम्पनीका एमडी अरविन्द शाहले बताए ।
पुलचोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अध्ययन गर्ने अरबिन्द, मनिष, ध्रुब र अमित लगायतको संलग्नतामा सुरु भएको स्प्यारो एसएमएसले अहिले सबभन्दा ठुलो नेटवर्कको रुपमा भ्यास सर्भिस प्रदान गरिरहेको छ । एक वर्षअघि स्प्यारो एसएमएसको मोवाइल एप्लिकेशन पनि सार्वजनिक भएको थियो । भुकम्प र अन्य आपतकालिन क्षणमा पनि स्प्यारोले राम्रो सेवा प्रदान गरेको जिबिजीको भिडियो स्टोरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तिम ९ मा समाबेश भएका प्रडक्टलाइ गुगलले बिशेष सम्मान गर्नेछ । यसअघि नेपालको एल्लो एपले यो सम्मान प्राप्त गरिसकेको छ । स्प्यारोले यस अघि एम बिलियंनथ अवार्ड लगायतमा समेत सम्मान प्राप्त गरिसकेको छ । जानकीले अहिले स्प्यारो पछि पिकोभिको र खल्ती एपहरु संचालनमा ल्याएको छ ।
कम्पनीका सिइयो अमित अग्रवालले यो सफलताले नेपालमा इनोभेटिभ रुपमा काम गर्न अझ हौसला मिलेको बताए । अन्तिम ९ मा समावेश भएको स्प्यारोलाइ अझ अघि बढाउन मार्च २३ सम्म अनलाइन मार्र्फत भोटिङ गर्न सकिनेछ । भोटिङको लागि यस भिडियो हेरेर तलको लिंकमा क्लिक गरि भोट गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
Click here to vote by 23 March 2017: https://goo.gl/8k7gGx
भोट प्रदान गर्न माथि उल्लेख लिंकमा क्लिक गर्नुहोस ।
GBG finalist GBG nepal sparrow sms 2017-03-18
Previous स्मार्टफोनको ड्यु क्यामेराले कसरी काम गर्छ ?
Next ‘ग्लोबल इभेन्ट फर डिजिटल बिजनेश’ मेलामा हारति सहभागि हुँदै
फेसबुक म्यासेन्जरमा पेपालको अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम
शाओमीको ए वान र नोट ५ ए बजारमा
आइफोन ८ को बुकिङ सुरु
टेलिकमले ल्यायो तिहार र छठका लागि आकर्षक अफर
नेपाल टेलिकमले नेपालीहरुको महान चाड पर्वहरुको उपलक्ष्यमा विगत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि कम्पनीका सेवाहरुमा …
सेयरमा लगानी गर्न चाहनेलाई डेटा एनालिटिक्स सफ्टवेयर सार्बजनिक
सेयरमा लगानी गर्न चाहनेलाई सत्यतथ्य जानकारी दिने उद्देश्यले मेरो लगानीको डेटा एनालिटिक्स सफ्टवेयर सार्वजनिक भएको छ …
भविष्यको आधार आइटी शिक्षा : कुन कोर्स पढ्ने ? कहाँ पढ्ने ?
प्राविधिक शिक्षा पढ्न कस्तो कलेज छान्ने ?
नेपाल खाद्य बैंकका अध्यक्ष रामराजा श्रेष्ठलाइ नाइजेरियामा बिशेष सम्मान
एसइईपछि अब कुन विषय पढ्ने ? यस्ता छन् अवसरहरु
आइटी ट्रेनिङमा ब्रोडवे इन्फोसिसको फड्को
सुबिसु क्यान कमटेक २०१७ सम्पन्न
कमटेकमा अवलोकनकर्ताको घुइँचो, आज अन्तिम दिन